Mogadishu Journal » 2021 » September » 21
Man Utd iyo Liverpool waa inay Sterling ka badbaadiyaan cidlada Man City – Ferdinand
Manchester United iyo Liverpool ayuu Rio Ferdinand ku booriyay inay ka fikiraan badbaadinta Raheem Sterling oo ah “lamadegaanka” Manchester City. Sterling ayaa qeyb weyn ka qaatay inuu ka caawiyo City inay ku guuleysato seddex horyaal oo Premier League ah tan iyo markii uu ka...
Sudan’s PM says coup plotters were inside, outside military: Live
Sudan’s PM Abdalla Hamdok says people involved in coup attempt were ‘arrested for first time’, adding that previous attempts were made. By Arwa Ibrahim21 Sep 2021 Sudan’s prime minister Abdalla Hamdok said on Tuesday that the coup attempt was organised by elements in and...
Madaxweyne Farmajo oo Warqadaha Aqoonsiga ka gudoomay Safiirada labo dal (Sawirro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay safiirrada cusub ee dalalka Nigeria Mudane Yusuf Yunusa iyo Indonesia Dr. Mohamad Hery Saripudin. Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria...
RW Rooble oo lagu wareejiyay Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare ee Somaliland (Magacyada)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa goordhaw lagu wareejiyay liiska musharraxiinta xildhibaannada Aqalka Sare ee Gobollada Woqooyi ( Somaliland). Rooble waxaa liiskan Musharaxiinta soo xulay una soo gudbiyay Guddoomiyaha...
Dowlada Mareykanka oo fariin adag u dirtay Madaxweyne Farmaajo iyo R/Wasaare Rooble
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa ka digtay in khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu adkeyn karo hanaanka doorashada ee dalka ka socda. War-saxaafadeed ay Waaxda soo saartay ayaa lagu yi...
Isku Day Afgembi Dhicisoobay oo goordhaw ka dhacay Sudan iyo Dowlada oo ka hadashay
Wararka ka imaanaya magaalada Khartuum ee caasimada dalka Sudan ayaa ku waramaya in goordhaw dalkaasi uu ka dhacay isku day afgembi oo maleegeen koox katirsan milatariga talada dalkaasi haya. Warbaahinta dalka Sudan ayaa ku warantay in uu dhacay isku day afgembi ay sameeyeen...